Yikuphi ama-Amazon ekuthengiseni amathuluzi angenza ukuphila kwakho kube lula?
Uma unolwazi lokuthengisa imikhiqizo e-Amazon, kufanele wazi ukuthi kuyinkqubo echitha isikhathi edinga imizamo ebalulekile nokuthuthukiswa okuqhubekayo. Awukwazi ukuphatha zonke izici zebhizinisi ngokwakho, ikakhulukazi uma usebenzisa i-Amazon njengomthombo wokuthengisa owengeziwe. Ngenhlanhla, ungathola eziningi zezobuchwepheshe ze-Amazon ezithengisayo ezokukwenza impilo yakho ibe lula. Ukuwasebenzisa, uzokwazi ukunikela isikhathi esengeziwe ekuthuthukiseni ibhizinisi lakho futhi ukwandise inqubo yokuqapha amamethrikhi webhizinisi le-Amazon.
Lo myalezo omfushane unikezwe ngezindlela ongayithuthukisa ngayo ibhizinisi lakho usebenzisa amathuluzi okuthengisa e-Amazon - fleece stoffe meterware. Ngakho-ke, masihlolisise lawa mathuluzi. Lapha ngiziphulaphula ngalokho abakhonza ngakho, hhayi ngempela ukuthi ngiyincoma yini.
I-Jungle Scout iyi-software ezenzakalelayo e-inthanethi ekhonza ukukusiza ukuthi uthole imikhiqizo ongayithola. kusuka. Kunengqondo ukusebenzisa leli thuluzi esigabeni sokuqala somkhankaso wakho wokwenza ngcono njengoba kunganciphisa isikhathi ekuqagela futhi kuqede zonke izingozi zokuqalisa.
Kunezinketho ezimbili ongayisebenzisa kanjani uhlelo lokusebenza lwe-Jungle Scout. Okokuqala yi-app yewebhu. Iyakwenza ukwazi ukuthola amasheya ezimakethe ezikhokhelwayo nemikhiqizo enenzuzo kulo lonke ikhathalogu ye-Amazon. Uhlelo lokusebenza lwe-Jungle Scout lunikeza ithuba lokuhlunga yonke i-database ngentengo, ukuthengisa, nesigaba ukuthola isamba esifanele kakhulu. Ngaphezu kwalokho, usebenzisa leli thuluzi, ungakwazi ukulandelela izikhundla zezinga lomncintiswano kanye namanani. Ukusebenzisa leli thuluzi njenge-Extension ye-Chrome, ungathola ulwazi lomkhiqizo osheshayo kunoma iliphi ikhasi njengoba upheqa. Izokunikeza ngentengo yomkhiqizo ngamunye, isikhundla sesikhundla, isibalo sokubukeza nokuningi kokuqhathaniswa komkhiqizo onembile.
AMZ Tracker iyithuluzi eliwusizo lokucwaninga lomkhiqizo wamahhala wabathengisi base-Amazon
. Kuyasiza ukukhula ngezikhundla ngosizo lokukhuthazwa, ukuhlelwa kwezinga lokuguqulwa nokuhlaziywa komncintiswano.
Noma kunjalo, inzuzo eyinhloko le software ingakunikeza ukucwaninga ngegama elingukhiye. Ngokusho kwedatha yenkampani ye-website, i-AMZ Tracker yiyona eyinhloko yekhiye ye-Amazon yokuqala eyake ikhiqizwa. Kusho ukuthi kunesitatimende esikhulu semibandela yokusesha ye-Amazon futhi inganelisa izidingo zakho zokwenza ngcono. Ukusebenzisa leli thuluzi, ungabona ukuthi amagama angukhiye ahlobene nemikhiqizo yakho ibe yimiphumela emiphumeleni ye-Amazon.
Ngokweqhinga le-AMZ Tracker lokuzivikela, ungathola izixwayiso zokubuyekeza okubi njalo lapho amakhasimende akho ashiya ngaphansi kokubuyekezwa kwezinkanyezi ezingu-5. Ikunika ithuba lokubasabela ngokushesha ukuxazulula izinkinga zabo bese ubacela ukuba baphakamise ukukala. Enye isevisi ye-AMZ Tracker ewusizo ixwayiswa ngokuthunjwa. Le sevisi inikeza izaziso noma kunini abanye abathengisi bezama ukuphanga uhlu lwakho. Ungababuyisela ngaphambi kokuqoqa idatha ebalulekile kumkhiqizo wakho.
Ngakho-ke, leli thuluzi lingaphezu nje kwesigaba sokulandelela njengoba kukunikeza ukuqondisisa indlela yokwenza ngcono uhlu lwakho lomkhiqizo, ukuthuthukisa izinga lakho lomkhiqizo, futhi ngisho nokuvela e-Amazon Thenga ibhokisi.